Maxay ku dhacday in mushaarka Trump uu hal doolar noqdo? | shumis.net
Home » Layaab » Maxay ku dhacday in mushaarka Trump uu hal doolar noqdo?
Wuxuu ku xaqiijyey qorshihiisa mushaarka yar wareysi uu siiyey barnaamijka 60 daqiiqo ee telefishinka CBS.
Laakiin markii wariyihii wareysanayey [Ms Stahl] ay u sheegtay in mushaarku yahay 400 kun oo doolar, wuxuu yiri : "Maya, ma doonayo inaan qaato mushaarkaas. Ma qaadannayo".
Madaxweynaha-la- doortay wuxuu ku joogaa balanqaadkii uu sameeyey intii uu ku jiray olallaha doorashada. Wuxuu u sheegay dad u soo baxay bishii September innaanu mushaarku "muhiimad aad u wayn" u lahayn isagga.
Mr Trump ma ahan hogaamiyihii ugu horreeyey ee Ameerikaana mushaarkiisa diidda inuu qaato. Herbert Hoover, oo hantidiisa ka sameeyey ganacsiga macdanta intii aannu qaban xafiiska iyo John F Kennedy, kaasi oo dhaxal u helay maalkiisa ayaa labaduba waxay diiddeen inay qaataan wax mushaar waxaynna ugu tabaruceen hay'addaha samafalka.
Mark Zuckerberg oo ah aasaasaha Facebook' waa qofka ugu mushaarka ugu yar shirkaddiisa, si la mid ah bilyineero iyo madax shirkaddo ayaa qaata mushaar 1 doolar ah. Sergey Brin &amp; Larry Page oo ah aasaasayaasha Google ayaa sanooyin badan mushaarkooddu wuxuu ahaa 1 doolar.
Marka la barbadhigo Ra'isalwasaaraha Canada wuxuu qaataa mushaar dhan 340,800 oo doolarka Canada ah.
Ra'saiwasaaraha Germany Angela Merkel waxay iyadu qaadataa $242 kun sanadkii, halka madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande uu helo sanadkii $198,700 sida uu BBC-du ka soo xigatay telefishinka CNN.
Ra'isalwasaaraha UK Theresa May waxay mushaar ahaan u qaadataa earns $186,119 sanadkii.
Ra'isalwasaarihii hore ee David Camer ayaa xilligii uu xilka hayey wuxuu la kulmay dhaleecayn xoogan ka dib kordhintii mushaarkiisa 10%, sanadkii 2015-kii.
Haa, oo kuwa badan ayaa mar horeba baaritaan lagu sameeyey. Isuduwidda maaliyadda Mr Trump ayaa su'aallo hareeyeen ka dib markii uu ku dhawaaqay inuu saddex carruur ah oo uu dhalay, Donald Jr, Eric, iyo Ivanka - iyo Ivanka ninkeedii Jared Kushner, loo doortay in guddiga kala guurka.
Mr Trump loogama baahna inuu iibiyo hanti, taas oo lagu qiyaasay balaayiin waxaana uu sheegay inuu uga tagi doonno ganacsiga boqortooyadiisa aaminaad indho la'a oo caruurtiisu maamuli doonaan.
Title: Maxay ku dhacday in mushaarka Trump uu hal doolar noqdo?